Saddex kursi oo maanta lagu dooranayo Jowhar | KEYDMEDIA ONLINE
Saddex kursi oo maanta lagu dooranayo Jowhar
Doorashada Aqalka sare ee Hirshabeelle, ayaa u muuqata in ay ka duwan tahay dhamaan doorashooyinkii ka dhacay maamullada kale, waxaana la furay inta badan tartanka kuraasa, taas oo sababtay in si weyn loogu loollamo qaar ka mid ah kursaasta.
JOWHAR, Soomaaliya - Baarlamaanka dowlad goboleedka HirShabeelle ayaa xalay doortay saddextii Senator ee ugu horreysay ee Aqalka Sare ee degaannada maamulkaas ku matali doona Baarlamaanka 11-aad ee JFS afarta sano ee soo aaddan.
Maanta oo Arbaco ah, 15/9/2021, ayaa la filayaa in mar kale magalada lagu doorto saddex kursi oo hor leh, kuwaas oo ay ku baratami doonaan 11 musharax, waxaana doorashada Aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle, la soo af-meeri doonaa berri oo khamiis ah.
Kursiga 1-aad - Kursiga ugu horreeya uguna adag ee maanta lagu tartami doono ayaa ah, kusigii uu afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhigay Dr. Dufle, waxaana ku loollami doona Dr Cismaan Maxamuud Maxamed (Dufle), Danjire, Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) iyo Musharax Raage Xasan Xuute.
Kursiga 2-aad - Waxaa ku baratami doona, Xasan Iidow Muxumed, Cabdinuur Ibraahim Nuur, iyo Cismaan Axmed Macow.
Kursiga 3-aad – Kursigaan ayaa ah kursiga ay ku qoran yihiin musharixiinta ugu badan, waxaana ku tartami doona ilaa shan musharrax, kuwaas oo kala ah, Cali Shacbaan Ibraahim, Caballe Xuseen Cabdi, Caasho Xuseen Abuukar, Cabdulahi tawaad iyo Cabdiqaadir Xanafi.
Tartanka ugu adag ayaa la filayaa inuu maanta dhex maro, Dr Cismaan Maxamuud Maxamed (Dufle) iyo Danjire, Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo ku loollami doona kuriga 1-aad, waxaana tartanka kursigaan si weyn ugu lug leh Madaxtooyada oo gadaal ka riixeysa Tarsan.
Danjire, Tarsan, waa safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, wuxuuna afartii sano ee la soo dhaafay, si weyn u difaacayay Kooxda Farmaajo, sidoo kale, wuxuu ka mid yahay shaqsiyaad la soo shaqeeyay Madaxweynayaashii hore (Shariif & Xasan) haddase kaga soo horjeeda si weyn.
Doorashada Aqalka sare ee Hirshabeelle, ayaa u muuqata in ay ka duwan tahay dhamaan doorashooyinkii ka dhacay maamullada kale, waxaana la furay inta badan tartanka, taas oo sababtay in si weyn loogu loollamo qaar ka mid ah kursaasta.
Sida caadada ka ahayd doorashooyinka Soomaaliya, musuq baahsan iyo lacag bixin xooggan ayaa la soo sheegayaa Jowhar, (Dufle) iyo (Tarsan) ayana horaanba wararku sheegayaan in xalay ilaa saakay wadaan lacag qeybin. Tallaabadaas waxaa lagu tilmaamay mid mushkilad ku ah doorashooyinka dalka.
Hirshabelle, Siddeed kursi ayuu ku leeyahay Aqalka Sare ee Soomaaliya, waxaana ilaa hadda la doortay saddexda sanatar ee kala ah;
Muuse Suudi yalaxoow, oo helay (55) Cod
Nuur Maxamed Geedi (Canjex), oo helay (70) cod
Fartunn Cabdulaadir Faarax, oo heshay (83) cod